‘समृद्ध बागलुङ’ बनाउने संकल्प, सम्भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिने !
Fri, Jun 5, 2020 at 1:15pm
कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, २७८ जना नयाँ सङ्क्रमित #आहा खबर# अख्तियारमा गोरखापत्र संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक सुशील कोइरालासहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा #आहा खबर# ट्रम्पकी छोरी पनि बाबुको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिइन् #आहा खबर# सुरू भयाे विदेशबाट नेपालीको उद्धार, म्यानमारबाट २६ जनालाई काठमाडौं ल्याइयो #आहा खबर# सेती अस्पतालमा भेटिए थप ६ जना कोरोना संक्रमित #आहा खबर# गठन भयाे रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति #आहा खबर# पीनम्ब्रल चन्द्रग्रहण लाग्दै आज, कस्ताे छ असर ? #आहा खबर# चलचित्र विकास बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा दयाराम दाहाल नियुक्त #आहा खबर# भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहविरुद्ध प्रहरीमा निवेदन दर्ता #आहा खबर# पूर्वमन्त्री मातृका यादवद्वारा ५० पत्रकारको कोरोना बिमा #आहा खबर# क्वारेन्टिनमा बस्ने महिलालाई स्यानिटरी प्याड र बालबालिकालाई दूध दिदैं टीकापुर नगरपालिका #आहा खबर# कोरोनाविरुद्ध नेपालले निर्माण गरेकाे खाेपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे चासाे #आहा खबर# जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका १ वृद्धको मृत्यु, मृतकको स्वाब संकलन #आहा खबर# रुकुम घटनामा संलग्न थप ७ जना पक्राउ #आहा खबर# निजी विद्यालयले असार १ देखि नयाँ भर्ना सुरू गर्ने #आहा खबर#
स्थानीय तहलाई सशक्त तुल्याउँदै प्रदेश र संघमा जिल्लाका मुद्दा सम्बोधनमा कुनै कमी आउन नदिने बताइयो !
शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५,	आहाखबर	4.58K
बागलुङ, १४ वैशाख
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बागलुङलाई समृद्ध बनाउने संकल्प गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले बिहीबार गरेको जिल्लाको विकाससम्बन्धी बहसमा त्यस्तो साझा अठोट लिइएको हो । बजेट, कार्यक्रम ल्याउनेदेखि नीति बनाउने तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिबाट आएको छ । जिल्लाबाट संघ र प्रदेशसभामा मात्रै १५ जना जनप्रतिनिधि छन् ।
स्थानीय तहलाई सशक्त तुल्याउँदै प्रदेश र संघमा जिल्लाका मुद्दा सम्बोधनमा कुनै कमी आउन नदिने बताइएको छ । जिल्लाको क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने बताए ।
चालू अवस्थाका आयोजना समयमै पूरा गर्ने र नयाँ योजना पार्नेतिर पहल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । “बागलुङको समृद्धि हाम्रो एकमात्र लक्ष्य हो”, उनले भने, “जिल्लाको विकासमा हामी सासंदहरुको सामूहिक पहल अघि बढेको छ ।”
प्रतिनिधिसभाका अर्का सदस्य सूर्य पाठकले प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी अधिकार आएकाले संघको भूमिका बढी समन्वयात्मक हुने बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहतिरै बढी अधिकार आएको छ”, उनले भने, “हामीले त्यही भूमिका बढाउनुपर्छ ।”
जिल्लाको समग्र विकासको खाका र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जिल्लाको मागलाई सशक्त रुपमा केन्द्रमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य कोपिला बोहोराले जिल्लाको विकासका लागि दृढ भएर लाग्ने बताए । “कुन उपायले हुन्छ, जिल्लाको विकासमा लागिपर्नेछु”, उनले भने ।
संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएका थिए । सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले पनि पूर्वाधार विकासमै जोड दिएका थिए । अन्तरजिल्ला र प्रदेशसमेत जोड्ने सडक केन्द्रीय आयोजनामा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरले विकासको खाका बनाउँदा सम्भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले एकीकृत विकासको अवधारणाबाट कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।
तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि जिल्ला पछाडि परेको उल्लेख गरे ।
बागलुङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले विकासमा सबै पक्षले एक नीति अपनाउनुपर्ने विचार राखे । उनले सबै दलका चुनावी घोषणापत्रलाई एकीकृत गरी विकासमा जुट्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले विकासका सम्भावना पहिल्याएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेट, कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
समितिले केन्द्र र प्रदेशमा माग गर्नुपर्ने विकास आयोजना किटानसमेत गरेको छ । सडक, विद्युत्, पुल, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, सिँचाइ, उद्योग, व्यापार क्षेत्रलाई जोड दिइएको छ ।